I-Poptin: Iipopu eziHlakaniphileyo, iiFomu eziMiselweyo, kunye neeMpendulo ezizenzekelayo Martech Zone
Ukuba ujonge ukuvelisa ngakumbi izikhokelo, ukuthengisa, okanye ukubhalisela iindwendwe ezingena kwindawo yakho, akukho mathandabuzo ngokusebenza kwezinto ezivelelayo. Akukho lula njengokuphazamisa ngokuzenzekelayo iindwendwe zakho, nangona kunjalo. Iipopu kufuneka zibekwe ixesha elinengqiqo ngokusekwe kukuziphatha kweendwendwe ukubonelela ngokungagungqi kumava kangangoko.
Poptin: Iplatifomu yakho yokuzivelela
Ipopin liqonga elilula nelifikelelekayo lokudibanisa izicwangciso zokuvelisa ezinje kule ndawo yakho. Iqonga libonelela:
Iipopu eziHlakaniphileyo -Yila okwenziwe ngokwezifiso, ii-popup pops eziphendulayo ezivela kwiitemplate ezinokwenziwa ngokwezifiso ezibandakanya ii-popboxs zebhokisi yokukhanya, iipopu zokubala, ukugqunywa kwescreen esigcweleyo, isilayidi sokungena, iiwijethi zentlalo, imivalo ephezulu kunye nezantsi.
Abacebisi -Yenza ifayile ye iipopin usebenzisa injongo-yokuphuma, ukulibaziseka kwexesha, ukupheqa ipesenti, ukucofa imicimbi, kunye nokunye.
target Ukujoliswa ngumthombo wetrafikhi, ilizwe, imihla, ixesha lomhla, iphepha elithile lewebhu.
Ukucinywa -Bonisa iindwendwe ezintsha, ezibuyayo, kunye nokufihla kwiindwendwe eziguqulweyo. Ungawalawula ngokupheleleyo amaza akho epopin.
Iifom ezifakiwe -Qokelela iwebhusayithi ekhokelela kwiifom ezifakwe ngaphakathi kwaye uzidibanise ngokulula.
Abaququzeleli -Thumela ababhalisi bakho abatsha ikhowudi yekhuphoni okanye i-imeyile eyamkelekileyo.
Uvavanyo lwe-A / B -Yila uvavanyo lwe-A / B ngaphantsi komzuzu. Thelekisa ixesha, unxibelelwano, itemplate, kunye nezinto ezibangela ukuba unamathele ngokulula kolona hlobo lusebenzayo lwakho popin.
Ukubika -Fumana idatha kunye neetshathi zamaxesha abekiweyo ngokubhekisele kwinani leendwendwe, izimvo, kunye namaxabiso okuguqula iipopin udalile.
Ukudityaniswa kweqonga zibandakanya i-Shopify, iJoomla, iWix, iDrupal, iMagento, IBgcommerce, Weebly, Webflow, Webydo, squarespace, Jimdo, Volution, Prestashop, Izinto zokuhamba, Pagewiz, Site123, Instapage, Tumblr, Opencart, Concrete5, Blogger, Jumpseller, Pinnaclecart, kunye neCCV Shop.
Ukudibanisa Iinkcukacha -Bandakanya iMailchimp, iZapier, GetResponse, ActiveCampaign, Ukujonga umkhankaso, iContact, ConvertKit, Hubspot, Klaviyo, Activetrail, Smoove, Salesflare, Pipedrive, Emma, ​​Remarkety, Mad-Mimi, Sendloop, Leadim, Leadmanager, Powerlink, Pulseem, inforUMobile, Responder, LeadMe-CMS, GIST, bmby, Flashy, inwise, drip, Mailer lite, Shlach Meser, Mailjet, Sendlane, Zoho CRM, Leader Online, ProveSource, Sendinblue, callbox, Leadsquared, Fixdigital, Omnisend, AgileCRM, kunye nePlando.
Bhalisela iPoptin Simahla
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa eyam Ipopin ikhonkco lokudibana.
tags: BigCommercezeblogaibha engezantsiIvenkile yeCCVIkhonkrithi5ukubala ukuveladrupalukugqunywa kwesikrini esigcweleyoibhokisi zebhokisi ezivelelayoUkukhwelapopup ezikrelekrelejimdoJoomlaUmtsibeliIikhokeloMagentoukuvula indawoIphephaIndawo yokuqhubaIPlandookupoqayoPrestaShopthengaSite123isilayidi-ngaphakathiiipopu ezilumkileyoiiwijethi zentlalosquaeveraceibha ephezuluTumblrUkuzinikelaUkugqobhoza kwewebhuwebokuewebhuwix